Abaphumeleleyo abahlanu abaphezulu kwiRoyal Rumble kwimbali yeWWE - Wwe
Abaphumeleleyo abahlanu abaphezulu kwiRoyal Rumble kwimbali yeWWE
# 3 2016 Royal Rumble, Triple H - iminyaka engama-46, iinyanga ezintlanu, kunye neentsuku ezingama-28
U-Triple H wema mde emva kweRoyal Rumble ka-2016
Elinye ilungu le-Evolution eliza kuvela kolu luhlu lwabaphumeleleyo lixesha eline-Royal Rumble eliphumelele, uThathu uH. 'UKumkani waKumkani' waphumelela iRoyal Rumble yakhe yokuqala ngo-2002 emva kokungena kwi # 22.
indlela yokufumana ukungcatshwa lusapho
Kwiminyaka elishumi elinesine kamva, u-Triple H wenza isimanga sokubuyela kwiringi njengowokugqibela kwiRoyal Rumble Match. Ulawulo lwaseRoma lukhusele i-WWE yeWorldweightweight Championship yakhe ngokuchasene nezinye i-Superstars ezingama-29 kolo khuphiswano. Ukwenza izinto zibe nzima nangakumbi kuLawulo, uVince McMahon wamenza owokuqala ukungena.
#Lolu suku Ngo-2016, @NtsikeleloTyala ungene kwiRoyal Rumble kwinombolo 30 ukuphumelela umdlalo kunye #WWE Ubuntshatsheli
Eli yayilixesha lokuqala ukhuphiswano lwe-wwe lukhuselwa kumdlalo wokugquma ukususela ngo-1992. #RoyalRumble # imvube2021 #hhh #iintsimbi pic.twitter.com/I36ON5M8
-I-Beermat (@TheBeermat) NgoJanuwari 24, 2021
Phambi kwembono yokuhlawulwa, u-Reigns wahlasela ngokumasikizi u-Triple H. U-Triple H kunye no-Dean Ambrose babengama-Superstars amabini okugqibela ashiyekileyo eringini. U-HHH oneminyaka engama-46 waphosa imbangi yakhe kwindawo engaphandle kwaye wakhusela i-WWE World Heavyweight Championship.
Umlo wexesha elide phakathi kweRoyal Rumble win nguTriple H. Uphumelele ngo-2002 kwakhona ngo-2016. pic.twitter.com/aZPcx89LtH
Izibalo zeWrestling (@WrestlingFacts) NgoJanuwari 27, 2019
Ekugqibeleni, u-Triple H waphulukana nesihloko kuLawulo lwamaRoma kwisiganeko esiphambili seWrestleMania 32. Ukanti, 'Umdlalo' wenza irekhodi elitsha ngokuba yeyona Superstar indala yokuphumelela iRoyal Rumble emva kokungena kwindawo yokugqibela.
YANGAPHAMBILI 3/5 OKULANDELAYO
Kutheni ndingasakwazi ukulila impilo yengqondo
Ungazifumana njani kwakhona kubudlelwane
ungayeka njani ukuba yintombazana encamatheleyo
Itumente yebhola yenamba yomhla wokukhutshwa kwamandla
ungayinceda njani intombazana ngokwahlukana kwayo